Mayelana NATHI - Boselan Tank Company Limited
Ukusungulwa kweShijiazhuang Zhaoyang Biogas Equipment Co., Ltd. ngo-Ephreli 2009, Isungulwe ngo-2017, iBoselan Tanks CO., LTD.
Inkampani yethu iyilungu lomphakathi we-biogas waseChina, oyilungu lenhlangano yezimboni yamandla wasemaphandleni yaseShanghai, futhi eyilungu lenhlangano yezamandla emaphandleni i-Hebei. Kuyinto ibhizinisi lesimanje elithatha imboni yemishini ye-biogas njengemboni ehamba phambili, izinikela ekuthuthukiseni ukonga ugesi kanye nokuvikela imvelo ngemikhiqizo yama-biogas, futhi ithatha ukudala umkhiqizo osezingeni eliphakeme nodumile njengenkampani yayo eyi-responsibility. Inkampani yethu inkulu, ubunjiniyela obuphakathi nendawo nabancane obusekela uhlelo lwethangi lwe-anaerobic, uhlelo lokugcina igesi, uhlelo lokuhlanza, uhlelo lokuhambisa igesi.
Umkhiqizo wenkampani yami ogqamile woqweqwe lwawo lohlanga, i-biogas double ulwelwesi lwesibambi sogesi, uphahla, ohlangothini lokuxuba, methane control ingcindezi elawula uhlelo lokuphakelwa kwegesi, i-biogas desulfurization tower, i-gas dehydrator, i-firedamp flame arrester, i-biogas condenser, indle, ukuvuselelwa kwe-biogas slurry solid isihlukanisi soketshezi, ithoshi legesi, ipompo lezinsalela ze-biogas, i-marsh gas flowmeter, igesi eliguquguqukayo echibini liyisivikelo sokucindezela esibi, uhlelo lwe-biogas slurry yokuvuselela umanyolo, imishini ye-organic fertilizer, eminye imikhiqizo ibe yi-patent kazwelonke.
1. Idrafti yeyunithi yamazinga wemboni, ikleliswa isithathu embonini;
2. Amabhizinisi asezingeni eliphezulu esifundazweni ihebheki;
4. Umbiko wokuhlolwa wezinga lokuhlola ukuphepha ngenhlanzeko kwemishini yamanzi yasekhaya nokuphuza kanye nezinto zokuvikela amathini ahlanganiswe koqweqwe lwawo;
5. Isitifiketi sesikweletu se-AAA;
6.AAA isitifiketi sokuhlonipha izinkontileka nokugcina izithembiso;
7. Ukukhiqizwa kwezokuphepha kwezinga lokulinganisa amazinga 3 (imishini);
8. Ukuhlonza ubungozi nokuhlolwa kwezinkinga okufihliwe nokuphathwa.
Kungani Kufanele ukhethe ithangi eliboshwe nge-BSL?
I-BSL ingomunye wabakhiqizi eChina ababamba iqhaza ekwakheni i-China Porcelain Enamel Products Industrial Standard (CPEPIS). Umkhiqizo wayo ukhonjiswe eChina Enamel Museum. Ubuchwepheshe nekhwalithi ye-BSL Tank kuhlala kungathenjwa.
I-BSL igcizelela ukusebenzisa ipuleti lensimbi yeTitanium njengensika yokukhiqiza, izingqimba eziphindwe kabili zobumba loqweqwe lwawo, ilula futhi inamandla kunamakhoyili wensimbi amnyama ashubile ashubile kanye nokumelana okungcono kokugqwala ukwanelisa izifiso zekhasimende.
Yini i-Glass efakwe ku-steel Bolted Tank?
I-Glass-fused-to-steel ubuchwepheshe be-premium emakethe yamathangi. Ubuchwepheshe bamathangi ahlanganisiwe bususelwa kubhodi ephezulu yensimbi yamandla njengokusebenza okuyisisekelo yize kuyinqubo yoqweqwe lochwepheshe, ehlanganise ukufakwa koqweqwe lwawo ebusweni bepuleti lensimbi ukuze kwenziwe ipuleti elihlanganisiwe elijwayelekile. Ithangi lingaqoqwa ngokushesha ngezindleko eziphansi ngemuva kokuthuthwa kweziqukathi kusayithi.
Izinzuzo ze-GFS Bolted Tank:
Izidingo zokulondolozwa okuphansi kakhulu esikhathini sempilo yethangi.
Ingilazi 2.Molten tho nhlangothi zombili amashidi ensimbi
Ukumbozwa kwangaphakathi kwe-3.BSL okwenzelwe ukumelana nama-acids kusuka kokuphakelayo okuvutshiwe
Ikhwalithi ye-4.Guaranteed enezingqimba ezifakwe efektri endaweni elawulwayo.
5.Hard, okuhlala isikhathi eside. Ithangi lizokwenza NEVER kufanele zibuyiswe.
Imiklamo ye-6.Cost ephumelelayo kunoma yimaphi amakhodi wedizayini wasekhaya noma wamazwe aphesheya.
7.Ithangi elingamelana nokugqwala nedome elingadingi sandblasting noma ukupenda kabusha = I-Greater Lifetime Value kunokhonkolo noma amathangi ensimbi ashiselwe.
Iziphi izinzuzo ngezinzuzo?
Isikhathi eside sokuphila (kuze kube yiminyaka engama-30) Kwehlisiwe izindleko zokusebenza
Ukwakhiwa kwamathangi ama-Modular bolted Ukufakwa kwesayithi okusheshayo nokushibhile - Ukunciphisa ama-timescales ephrojekthi, izindleko nemfuneko yemishini esizeni
Ukuvumelana nezimo kokwenza kabusha imodeli Amathangi anganwetshwa, adilizwe futhi ahlelwe kabusha anikeze inani lempahla yesikhathi eside
Optimum ukugqwala ukumelana
Ye-Glass-Fused-to-Steel Isitoreji esiphephile, esinezindleko zokunakekela okuncane
Qedela ububanzi bezinketho zobubanzi nokuphakama ngezixazululo zamandla esitoreji Isisombululo esisebenza kahle kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende